Usenyandezulu umlingisi odumile wakuleli | Scrolla Izindaba
Usenyandezulu umlingisi odumile wakuleli
Kubikwa ukuthi umlingisi obeyisishoshovu sodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, uPatrick Shai oneminyaka engu-57, utholwe elenga egaraji emzini wakhe, ngunkosikazi wakhe uMmasechaba Shai e-Dobsonville, e-Soweto, ngoMgqibelo ekuseni.
Izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni ziqinisekiswe esitatimendeni kanti umndeni ucela ukunikwa isikhathi sokubhekana nalokhu kulahlekelwa okubuhlungu.
Lo mlingisi waphumela obala ngokuhlukumeza unkosikazi wakhe ngo-2011 wabe esesungula inhlangano ezimele ebizwa ngokuthi, iKhuluma Ndoda, okuyinhlangano yabesilisa elwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.
Ukuzibulala kukaShai kuza ngemuva kwezinsuku ezintathu ekhiphe ividiyo ephonsela umculi uCassper Nyovest inselelo emdlalweni omnandi wesibhakela.
Abangani nabathandekayo basola ukuthi imibono yabantu yaku-Twitter emenze wangena emgodini omnyama ojulile okumenze wabanomuzwa wokuthi angeke esakwazi ukuphuma kuwo.
Kwividiyo, uthe ukulwa nalo mculi kuyisifiso sakhe ngaphambi kokuthi ashone wathi ufuna le mpi iqoshwe etsheni lethuna lakhe.
Ngebhadi abasebenzisi bezinkundla zokuxhumana abazange bajabuliswe ngamanye amagama asetshenziswe yilo mlingisi wodumo ikakhulukazi ngesikhathi ebiza uCasper “nge-son of a bitch”.
Lokhu kwalandelwa uchungechunge lwemibhalo yaku-Twitter ebithi uPatrick Shai akahoxiswe.
Kamuva uye wakhipha enye ividiyo exolisa ngesenzo sakhe.
“Ngiyaxolisa kakhulu ngokuthuka umama kaCassper,” esho.
“Umusho wokugcina umoshe into enhle ebengifuna ukuyizuza futhi ngiyaxolisa kakhulu ngokukhetha kabi amagama. Bengifuna ukusebenzisa ividiyo ukuze ngithole ukwesekwa ngomsebenzi engiwenzayo ngokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Benginezinhloso ezinhle kodwa inhloso enhle imoshwe ulimi oluyinhlamba. Ngiyaxolisa kakhulu”.
Umlingisi okhungethwe yilesi sigameko, uHlomla Dandala, ungene ezinkundleni zokuxhumana esola imibhalo yaku-Twitter ngokushona kukaShai.
Bonke abantu abakhulume kabi kuye, ngiyethemba ukuthi senijabule manje,” kusho uDandala.
“Laba abebemfuna eshonile, ngiyethemba niyajabula manje. I-Cancel-culture imbulele. Uma kuwukuthi ubeyihlazo kuwe, ubengumeluleki kanye nobaba kwabaningi.”
Omunye umlingisi osemnkantshubomvu u-Israel Makoe uthe kumele sigxile emazingeni okucindezeleka ngokwengqondo kwabalingisi bethu.
Wengeze wathi “UBra Pat ubeyindoda elungile”.
UPatrick Shai ushiya unkosikazi wakhe uMmasechaba oneminyaka engu-38 nezingane ezimbili.